स्वीडिस एकेडेमीभित्रको 'सेक्स स्क्याण्डल' यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार वितरण नहुने :: PahiloPost
स्वीडिस एकेडेमीभित्रको 'सेक्स स्क्याण्डल' यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार वितरण नहुने
4th May 2018, 04:24 pm | २१ बैशाख २०७५
एकेडेमीको साप्ताहिक बैठक। फोटोः एफपी
स्वीडेनः यस वर्षको साहित्य तर्फको नोबेल पुरस्कार वितरण नहुने भएको छ। साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार छनोट गर्ने संस्था स्वीडिस एकेडेमीमा विवादमा परेपछि सो पुरस्कार वितरण नहुने भएको हो। बिहीवार स्टकहोममा सम्पन्न एकेडेमीको साप्ताहिक बैठकले पुरस्कार वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो।
पछिल्लो समय एकेडेमिक भित्रको सेक्स स्क्याण्डल सार्वजनिक भएपछि एकेडेमीका प्रमुख सारा ड्यानीससहितका सदस्यहरूले राजीनामा दिए पछि एकेडेमी अहिले अल्पमतमा परेको छ।
स्वीडिस एकेडेमीका एक सदस्यका पतिमाथि लागेको यौन दुराचारको आरोपका कारण एकेडेमी संकटमा परेको बीबीसीले जनाएको छ। यही स्क्याण्डलका कारण यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार समेत वितरण नहुने भएको हो।
एकेडेमीले शुक्रवार वक्तव्य जारी गर्दै यस वर्षको नोबेल पुरस्कार सन् २०१९ मा समानान्तर रूपमा वितरण गरिने जनाएको छ। यसअघि सात पटक सम्म एकेडेमीले पुरस्कार वितरण रोकेको थियो। सन् १९१५, १९१९, १९२५, १९२६, १९२७, १९३६ र १९४९ समेत वितरण रोको थियो।
त्यसमध्ये पाँच पटक अर्को वर्षको पुरस्कारसँगै वितरण गरिएको थियो। वक्तव्यमा एकेडेमीले पछिल्लो समय एकेडेमीको विश्वसनीयतामा कमी आएको र एकेडेमीको विश्वास आर्जन गर्न केही समय लाग्ने भन्दै त्यसका लागि यस वर्षको पदक वितरण नगर्ने जनाएको छ।
के थियो स्कयान्डल?
स्वीडिस एकेडेमीमा गत वर्ष नोभेम्बर देखि विभाजन देखिन थालेको थियो। स्वीडिस एकेडेमीको सहयोगमा सांस्कृतिक योजना चलाउँदै आएका फ्रान्सेली फोटोग्राफर जिन क्लाउडे अर्नल्डमाथि १८ महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका थिए।
यद्यपि, यी आरोपलाई उनले अस्वीकार गर्दा आएका छन्।
एकेडेमीले आर्नल्टकी श्रीमती, लेखक तथा कवयित्री क्याट्रिना फोर्सटेन्सनलाई मतदानमार्फत् सदस्यबाट बर्खास्त गरेको थियो।
१८ सदस्यीय कमिटीबाट उनलाई बर्खास्त गरे पछि एकेडेमीमा राजीनामा लहर चल्यो। एकेडेमीका सदस्यहरूबीच विभाजन सिर्जना भयो। उनको समर्थनमा एकेडेमीकी प्रमुख प्राध्यापक सारा ड्यानिसले समेत राजीनामा दिइन्।
एकेडेमीभित्रका सदस्यबीच एकअर्कामा सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोप लगाउन थाले। एकेडेमीका एक सदस्यले प्रमुख ड्यानिसलाई हाल सम्मकै खराब प्रमुखको रूपमा चित्रित गरे।
उनका समर्थकले प्रा. डेनिसलाई एकेडेमीभित्रको पितृसत्ता विरुद्ध लडाइ गर्ने साहसीको रूपमा त्रित्रित गरेकी छन्। उनले राजीनामा दिएसँगै उनको समर्थनमा स्वीडेनका सांस्कृतिक मन्त्रीले व्लाउज लगाएर उनीप्रति एक्येवद्धता जाहेर गरेका थिए।
एकेडेमीको प्रावधानलाई हेर्ने हो भने एकेडेमीका आजिवन सदस्यले राजीनामा दिन नसक्ने भए पनि राजीनामा दिएका छन्।
स्वीडिस एकेडेमीभित्रको 'सेक्स स्क्याण्डल' यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार वितरण नहुने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।